कोरोना विरुद्धको रुसी खोप ९२ प्रतिशत प्रभावकारी भएको दाबी « प्रशासन
कोरोना विरुद्धको रुसी खोप ९२ प्रतिशत प्रभावकारी भएको दाबी
काठमाडौँ । कोरोना भाइरस कोभिड –१९ विरुद्धको रुसी खोप ९२ प्रतिशत प्रभावकारी भएको दाबी गरिएको छ । १६ हजार स्वयम्सेवहरुलाई ‘स्पटनिक भी’ खोप लगाएको डाटाका आधारमा नतिजा सार्वजनिक भएको हो ।
केही दिन अगाडि अमेरिकाको फाइजर र जर्मनीको बायोएनटेक कम्पनीले ४३ हजार मानिसमा गरिएको अध्ययन एवम् परीक्षणपछि खोप ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावकारी भएको बताएको थियो । तर, स्पट्निको डाटा तुलनात्मक रुपमा थोरै मानिसमा आधारित भएपनि प्रारम्भिक रिसर्चको नतिजा भने उत्साहजनक मानिएको छ । यो खोप मस्काउस्थित ‘नेस्नल रिसर्च सेन्टर फर एपिडेमिओलोजी एण्ड माइक्रोबायोलोजी’ले तयार गरेको हो । हाल बेलारुस, यूएई, भारत र भेनेजुएलामा तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल सञ्चालन गरिरहेको छ ।
तर यसबारे कतिपय वैज्ञानिकहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले चाहिँ डाटा निकाल्नमा हतार गरिएको बताएका छन् ।
हालसम्म स्पट्निकले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी कुनै समस्या देखाएको छैन । रुसी अनुसन्धानकर्ताका अनुसार स्वयमसेवकहरुले दुईमध्ये खोपको पहिलो डोज लगाएको २१ दिनसम्म कुनै गम्भीर प्रतिक्रिया अथवा साइड इफेक्ट देखिएका छैन ।
तर, फाइजर जसरी नै यसको पनि पूरा डाटा संकलन भएपछि मात्र आधिकारिक मान्यता दिन सकिने बताइएको छ । फाइजर र स्पट्निक दुवै खोपले दुई महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर दिन सकेका छैनन् । के यसले वृद्धहरुमा पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेछ जो सबैभन्दा बढी कोरोनाको जोखिममा हुन्छन् ? यसबाट प्राप्त सुरक्षा कति समयसम्म रहन सक्छ ? रुसी वैज्ञानिकहरुले यस सम्बन्धी सबै तथ्यांकहरु प्रमुख अन्तराष्ट्रिय मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित गरिने बताएका छन् । यदि सबै तथ्यांक सकारात्मक देखिए भाइरस विरुद्ध मानिसहरुलाई बचाउने एकभन्दा बढी उपाय निश्चित हुनेछ ।
हाल रिसर्चरहरुको अनुमानमा स्पट्निक भी को ५० वटाभन्दा बढी देशबाट १।२ अर्ब डोजको माग आइसकेको छ । र, उनीहरुले विश्वव्यापी बजारका लागि प्रत्येक वर्ष ५० करोड डोजसम्म उत्पादन गर्न सक्ने दाबी गरेका छन् । बीबीसी